Smart Start - Robbinsdale Area Schools
Si Ammaan ah Ugu Soo Laabashada Dugsiga
Sida had iyo jeer, caafimaadka iyo badbaadada ardaydeena, shaqaalaheena iyo qoysaskeenu waa mudnaanta koowaad. Go'aamadayada waxaa hagta Waaxda Waxbarashada ee Minnesota iyadoo lala kaashanayo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota.
Go'aan kasta oo aan qaadanno waxaa hagta qiyamkeenna:
Caafimaadka iyo badbaadada ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska
Diirada saar baahida bulshada-shucuurta
Sinaan, cadaalad iyo ka mid noqosho
Buuxinta baahiyaha kaladuwan ee ardayda iyo shaqaalaha
Sii wadida edbinta taas oo ku saleysan heerarka Gobolka
Aragtida Degmada ee Midaysan iyo Siyaasadda Sinnaanta oo ah dukumiinti hagaya
Sababta oo ah dabeecadda sii kordheysa ee COVID-19 iyo dadaalada socda ee ah in la abuuro lana ilaaliyo jawi waxbarasho oo ammaan u ah ardayda Dugsiyada Aagga Robbinsdale, ayaa cusbooneysiinta boggan si joogto ah loo sameyn doonaa. Degmadu waxay la wadaagi doontaa macluumaadka muhiimka ah qoysaska haddii ay dhacdo isbeddel ku yimaada qaababka waxbarashada. Wadahadal dheeri ah ayaa lagala socon doonaa dugsiga wixii khuseeya macluumaadka gaarka ah ee dugsiga. Waxaan sii wadi doonaa inaan dib u eegno xogta degmada laba jeer bishii (15ka iyo 30ka) si aan u sii wadno dib u eegista aan ku sameyneyno wareegga xogta ee 14 maalmood.
Tixgelinta Smart Start
Tixgelinnada loogu talagalay Smart Start-keena waxaa ka mid ah:
Shaqaalaha, ardayga, jawaab celinta waalidka / ilaaliyaha
Bulsho / shucuur
Dugsiga Dhexe & Sare:
Qofka Barashadiisa (Arbacada asynchronous)
Xaashida Su'aalaha La Weydiiyo - 12/21/20
2020-2021 Jadwalka Sanad Dugsiyeedka - 12/21/20
Smart Start Qorshe Barasho Amni
Smart Start 2020-2021 Moodooyinka Barashada
Moodooyinkaan waxaa lagu fulin doonaa iyadoo lagu saleynayo hagidda saraakiisha caafimaadka ee deegaanka iyo arrimo kale oo tixgelinaya. Markuu sanad dugsiyeedku socdo, oo haddii loo beddelo qaab aan ahayn Distance Learning PLUS, qoysasku waxay awoodi doonaan inay doortaan inay ku sii socdaan moodeel waxbarasho fog oo loo yaqaan 281 Distance Learning School.
SARE COVID-19 Heerka Gudbinta Bulshada
Ardaydu Waxbay Ku Bartaan Guriga, Waxayna Ku Qaataan Barashada Shakhsiyeed iyagoo wata Taageero Midaysan
Ardaydu waxay ku lug yeelan doonaan fasallo waxayna qaban doonaan barashada fog. Barashada waxaa ka mid ah barashada tooska ah ee macalinka iyo shaqada ardayda madaxa banaan, oo ay ku jiraan iskudhaf shirar macmal ah, kalfadhiyo fasal is dhexgal ah iyo fiidiyowyo horay loo duubay. Qaybaha waxbarashadu waxay ka koobnaan doonaan maadooyinka tacliimeed iyo manhajka bulshada-shucuurta.
SARE ⟷ YAR
Heerka Gudbinta Bulshada
Ardaydu Waxbay Ku Bartaan Guriga Iyo Iskuulka
Ardaydu way rogi doonaan kaqeybgalka sidaa darteed in ka badan 50% dadka iskuulka ku jira ayaa ku jira dhismaha maalin dugsiyeed kasta. Waxay kuxirantahay jadwalka maalinlaha ah, ardayda qaarkood waxay wax ku baran doonaan shaqsi ahaan halka kuwa kalena ay kaqeyb qaadan doonaan Barnaanshaha Barashada Fogaanta.
TAHRIIBKA-19 Gudbinta Heerka Bulshada
Ardaydu Waxbay Ku Bartaan Iskuulka
Ardaydu waxay wax ku baran doonaan dhaqan ahaan, waayo-aragnimo waxbarasho oo iskuul leh tallaabooyin badbaado oo dheeri ah oo la hirgaliyay iyadoo lagu saleynayo hagidda saraakiisha caafimaadka. Tilmaamaha nabadgelyada, ardayda ayaa isla koox isku mid ah maalintii oo dhan; maalintii oo dhan ardayda dugsiga hoose iyo sida ugu macquulsan ee ardayda waaweyn.
Ikhtiyaarada Barashada Xulista Qoyska
Ardayda Fasalka K-12 waxay dooran karaan inay gurigooda wax ku bartaan waqti buuxa
Ikhtiyaarkaan barashada fog (ardayda K-12) waxaa loogu talagalay qoysaska aan rabin inay ardaydoodu kaqeyb galaan fasallada shaqsi ahaan inta lagu gudajiray cudurka faafa ee COVID-19.
Qoysasku waa inay iska diiwaangeliyaan doorashadan. Diiwaangelinta 281 Dugsiga Barashada Fogaanta ayaa xiran.
Ardayda Fasalka 9aad iyo 10aad
Akadeemiyadda Virtual Robbinsdale (RVA) waa iskuul khadka tooska ah loogu talagalay ardayda dhigata dugsiga sare. RVA waxay bixisaa manhaj toos ah oo internetka ah, oo leh koorsooyin loo sameeyay in lagu baro internetka. Ardaydu kuma kulmaan fasalka jir ahaaneed waqti cayiman, waxayna ardayda siinayaan dabacsanaan ay ku qaabeeyaan khibradooda dugsiga sare.
Koorsooyinka onlaynka ah waxay bixiyaan isla caqabad qaab kale ah. Waqtiga iyo shaqada waxay la mid noqon doonaan koorsooyin dhaqameed, qof ahaan ah. Koorsooyinka waxaa ka mid ah:
Wadahadalka khadka tooska ah, kal-fadhiyada fasalka iyo mashaariicda
Ardaydu waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay ku sii qornaadaan dugsigooda hadda iyadoo degmadu u dhexeyso moodeellada waxbarasho ee sannad dugsiyeedka oo dhan.
Ardayda Fasalka K-12
Dugsiyadu waxay sannadka ka bilaabayaan Foomka Barashada Fogaanta, oo waxay si tartiib tartiib ah ugu dhex wareegi karaan fasallada qofka iyo barashada fogaanta sanadka oo dhan (iyadoo ku xiran heerka gudbinta ee COVID-19 iyo arrimo kale).
Haddii aad jeceshahay in ardaygaagu raaco dhaqdhaqaaqa degmada ee u dhexeeya moodeellada wax lagu baranayo, wax tallaabo ah looma baahna.
Nasashada Kadib-Gu'ga COVID-19 Xusuusin
Haddii aad u safartay meel ka baxsan Minnesota inta lagu gudajiray Fasaxii Gu'ga, fadlan dib u eeg tijaabooyinkan 'COVID-19' iyo xusuusinta karantiillada.
Ka caawi qof walba inuu caafimaad qabo
Abriil 5 2021
Maaddaama aan rajeyneyno in ardayda berri ay ku soo noqdaan dugsiga, waxaan rabnaa in aan xusuusino qoysaska iyo shaqaalaha in ay guriga joogaan haddii ay xanuun dareemaan.
Jadwalka Kala Guurka Qofka ee Ardayda Dugsiga Sare
Hubi jadwalkayaga kala guurka, oo ay ku jiraan taariikho muhiim ah heerka darajada iyo sidoo kale maalmaha aan dugsiga ahayn.
Jadwalka Kalaguurka Ku-Meel Gaarka ah ee Barashada - Ardayda Dugsiga Sare
Febraayo 10 2021
Macluumaad Dheeraad ah oo Qaab Barasho
Febraayo 8 2021
Isgaarsiintaani waxay wadaageysaa macluumaad qaab waxbarasho oo dheeri ah iyo macluumaad kusaabsan 281 Distance Learning School.
Cusboonaysiinta qaabka waxbarasho ee ardayda dugsiga sare, Feb 2021
Febraayo 3 2021
Fadlan u akhri akhbaarta cusub ee muhiimka ah ee ku saabsan soo dhaweynta ardayda dugsiga dhexe iyo sare ee ku soo noqnoqda shaqsiyan, waxbarashadda dugsiga. Horraantii toddobaadkan waxaan la kulanay kooxdayada taageerada gobolka si aan ugala hadalno oo aan dib u eegis ugu sameyno qorshaheenna ku aaddan sidii ardayda loogu soo celin lahaa barashada isku dhafan.
2020-2021 Qaabka Barashada Sanad Dugsiyeedka iyo Jadwalka Jadwalka
Shirka Golaha Dugsiga ee Ogosto
Ogast 10: Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale waxay ku dhawaaqeen qorshooyin ay ku bilaabayaan sanad dugsiyeedka Barashada Fogaanta PLUS waxayna wadaageen in qaab beddel macquul ah uu dhici karo Oktoobar 19.
Ogast 11-12: Maamulka degmada & dhismaha ayaa sii wadaya ka shaqeynta qaab dhismeedka qorshaha barashada nabdoon.
Ogast 13: Diiwaangelintu waxay u furmaysaa Daryeelka Carruurta ee 'Adventure Club'. Qoysasku waxay iska qori karaan https://rdale.ce.eleyo.com . Xilliga qoysaska waa inay doortaan waa "Daryeelka Da'da Dugsiga ee Qaabka Moodada Barashada Fogaanta Sannad-dugsiyeedka 2020-2021."
Ogast 13-21: Maamulayaasha iyo shaqaaluhu waxay ku shaqeeyaan shey u gaar ah dugsiga si loogu helo qorshe waxbarasho badbaado leh.
Ogast 21: Degmadu waxay wadaagtay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan arrimaha go'aan qaadashada, qaabka barashada isku dhafan, ka bixitaanka gaadiidka, 281 Dugsiga Barashada Fogaanta iyo muddooyinka dib u eegista xogta ee degmada COVID-19.
Toddobaadka Ogosto 24: Qorshayaasha la safeeyey; Kulamada waalidka / masuulka ee su'aalaha la iska waydiiyo ee lala yeesho maamulayaasha iskuulka.
Ogast 31: Qorshaha barashada nabdoon ee la soo geliyay websaydhka.
Ogast 31: Waqtiga kama dambaysta ah ee qoysaska ay uga bixi karaan adeegyada gaadiidka.
Agoosto 31 - Sebtember 4: Guryo Furan oo Dugsi-ku-Celin ah oo Furo ah.
Sebtember 1-30: Dib-u-eegis ku samee xogta gobolka & caafimaadka deegaanka si loo go'aamiyo sii socoshada ama isbeddelka qaabka barashada Oktoobar.
Sebtember 18: Degmadu waxay mar kale ku celisay inay u diyaar garoobeyso qaab beddelid waxbarasho oo suuragal u ah dhammaan ardayda Oktoobar 19.
Oktoobar 2: Isbeddelka ku yimid xaaladaha degmada ee COVID-19, Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay ku dhawaaqeen qorshayaal loogu wareejinayo ardayda PreK iyo kuwa aasaasiga ah qaab waxbarasho isku dhafan, laga bilaabo Nofeembar 9, iyo ardayda dugsiga sare ee ku haray barashada masaafada. Ardayda dugsiga dhexe iyo sare waxay suurta gal tahay inay badalaan qaababka waxbarasho Talaadada, Janaayo 26 - iyagoo ku saleynaya tusaalaha la jaan qaadaya tirakoobka xogta COVID ee hadda jirta.
Oktoobar 27: Isbeddelka ku yimid tirada lambarrada kiisaska COVID-19, taariikhda u gudubka u wareejinta PreK iyo ardayda aasaasiga ah ee qaab barashada isku dhafan ayaa bilaabmi doonta Nofeembar 16 oo leh taariikho bilow ah. Kooxdayada khabiirada caafimaadka ee gobolka ayaa taageeray qorshaheena kala guurka.
Nofeembar 2 iyo 4-6: Maalmaha qorshaynta shaqaalaha dugsiga hoose.
Nofeembar 5: Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale waxay ku dhawaaqeen qorshooyin ah inay ku sii jiraan barashada fog ardayda oo dhan. Kooxda gobolka khubaro caafimaad ayaan mar dambe taageerin qorshaha kala guurka.
Nofeembar 6: Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay emayl ugu direen qoysaska si ay u caddeeyaan barnaamijyada daryeelka carruurta.
Nofeembar 6: Dr. Stephanie Burrage, Kormeeraha guud ee ku-meel-gaarka ah ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale, ayaa la wadaagtay farriin fiidiyoow ah oo ku saabsan go'aanka ku sii jiritaanka Distance Learning PLUS.
Nofeembar 13: Macluumaadka ku saabsan Xarumaha Taakulaynta Ardayda waxaa lala wadaaga qoysaska.
Nofeembar 18: Badhasaabka Walz wuxuu ku dhawaaqay Amarka Fulinta 20-99, isaga oo dhigaya xannibaadyo cusub.
Nofeembar 19: Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay qoysaska ugu soo direen ehellada tallaabooyinka degmo dugsiyeedyadu u baahan yihiin inay qaadaan si looga caawiyo ka hortagga iyo ka-hortagga cudurka loo yaqaan 'coronavirus' afarta toddobaad ee soo socota: dhallinyarada iyo cayaaraha dugsiga sare ayaa hakad la geliyay; shaqsiyan shaqsiyadii carruurnimada hore iyo waxbarashadii bulshada oo hakad galay; kirooyinka xarunta dugsiga ayaa hakad galay.
Diisambar 16: Badhasaabka Walz wuxuu ku dhawaaqay degmo dugsiyeedku inay u gudbin karaan ardayda dugsiga hoose qaab shaqsiyeed barasho laga bilaabo Janaayo 18, 2021.
Diisambar 16: Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale waxay emayl ugu direen qoysaska faahfaahinta macluumaadka uu baraaruhu la wadaagay.
Dec. 16: Waaxda Waxbarshada ee Minnesota (MDE) waxay siidaysay hagitaan casri ah oo loogu talagalay iskuulada Qorshaha Amni ee Badbaadada.
Diisambar 18: Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay qoysaska ugu soo direen emayl macluumaad dheeri ah oo ay la socdaan wadaagista waqtiga kama dambaysta ah ee soo socda si ay isu diiwaangeliyaan (ama ka baxaan) 281 Distance Learning School.
Diisambar 21: MDE waxay sii deysay faahfaahin ku saabsan Qorshaha Barashada Nabdoon.
Diisambar 21: Dugsiyada Xaafada Robbinsdale waxay e-mayl ugu direen qoysaska si ay u cadeeyaan macluumaadka una wadaagaan xaashida Su'aalaha la Weydiiyo.
Diseembar 22 (3 pm): Waqtiga kama dambaysta ah ee la iska diiwaangeliyo (ama laga baxo) 281 Distance Learning School.
Diisambar 23: Kheyraadka Shaqaalaha ayaa go'aamin doona inta shaqaale looga baahan yahay dhisme kasta, iyada oo ku saleysan diiwaangelinta 281 Dugsiga Barashada Fogaanta.
Jan 4: Kooxda Taliska Dhacdooyinka Degmada ayaa la kulmi doona si ay u soo saaraan talo soo jeedin qorshe waxbarasho.
Toddobaadka Jan. 4: Talada kooxda Taliska Dhacdada waxaa dib u eegi doona Golaha Xukuumadda. Qorshaha waxaa lala socodsiin doonaa qoysaska.
* Maaha jadwal dhameystiran
281 Distance Learning School wuxuu u adeegaa ardayda Kindergarten ilaa Fasalka 12aad. Dugsigu wuxuu bixiyaa "wakhti kasta, meel kasta" barasho, waxaana wax ka dhiga macallimiinta iyo shaqaalaha Dugsiyada Robbinsdale Area. Dugsigan waxaa loo bixiyaa iyadoo la raacayo Amarka Fulinta ee Guddoomiyaha iyo Waaxda Waxbarashada ee Minnesota sababo la xiriira COVID-19.
Waqti la duubay oo la daawan karo wakhti kasta.
Xaqiijiyay kiis wanaagsan
Tani waa xaqiijin ka timid Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ee tijaabada COVID-19 ee shakhsiyan.
Aqoonsiga iyo kormeerka dadka laga yaabo inay la xiriiraan qof faafa. Xaaladda COVID-19, kormeerku badanaa wuxuu ku lug leeyahay is karantiil si loo xakameeyo faafidda cudurka.
Ardaydu si badbaado leh ayey wax ugu bartaan guriga waxayna ku lug yeeshaan barashada shaqsiyeed iyagoo wata taageerooyin mideysan. Barashada waxaa ka mid ah barashada tooska ah ee macalinka iyo shaqada ardayda madaxa banaan, oo ay ku jiraan iskudhaf shirar macmal ah, kalfadhiyo fasal is dhexgal ah iyo fiidiyowyo horay loo duubay.
Ardaydu si nabadgelyo ah ayey wax ugu bartaan guriga iyo dugsiga.
Ardaydu si nabadgelyo ah ayey wax ugu bartaan dugsiga.
Qalabka Badbaadinta Shakhsiyeed (PPE)
Qalabka ka difaaca faafitaanka COVID-19 oo ay ka mid yihiin: maaskaro ama waji daboolid, galoofyo, goonno iyo gaashaammada wejiga
Istaraatijiyad lagu xaddidayo faafitaanka COVID-19 iyadoo la ilaalinayo 6 cagood oo bannaan oo u dhexeysa iyaga iyo dadka kale.
Akadeemiyada Virtual Robbinsdale (RVA)
Iskuul khadka tooska ah loogu talagalay ardayda dhigata fasallada 9aad iyo 10aad oo bixiya manhaj dhammaystiran oo toos ah, oo leh koorsooyin loo sameeyay in lagu baro internetka. Ardaydu kuma kulmaan fasalka jir ahaaneed waqti cayiman, waxayna ardayda siinayaan dabacsanaan ay ku qaabeeyaan khibradooda dugsiga sare.
Falka lagu xaqiijinayo astaamaha iyo soo-gaadhista suurtagalnimada kahor baaritaanka fayraska.
Karantiil shakhsi ahaaneed
Ficilka kala soocida dadka kale.
Ficilka ka gaabinta xiriir kasta oo lala yeesho shakhsiyaad kale in muddo ah-marka laga hadlayo COVID-19, laba toddobaad-si loo ilaaliyo bal in astaamo kasta oo cudurka ka mid ahi soo baxayaan ka dib marka la soo qaado.
Barashadani waxay ku dhacdaa waqtiga dhabta ah, halka barashada asynchronous-ka ay ku dhacdo iyada oo loo marayo wadiiqooyinka khadka tooska ah laga qaato iyada oo aan is-dhexgalka waqtiga-dhabta ahi jirin.
8/10/2020 Soo bandhigida Gudiga
8/10/2020 Go'aanka Golaha Dugsiga